သတင်းထောက် လက်စွဲ - Myanmar Law Center
Myanmar Law Center
Myanmar Web SItes List
You are here: Myanmar Law Center / သတင်းထောက် လက်စွဲ
SearchaMyanmar law here. ဤဆိုက်တွင် ISO-10646 standard ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် ရှာလိုရာကို တိတိကျကျ ရှာဖွေပေးနိုင် ပါသည်။ မိမိ ရှာလိုသည့် စာလုံးကို ဤနေရာတွင် မြန်မာ ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ပြီးရှာပါ။
မြန်မာ သတင်းထောက်များ လက်စွဲ
Parent Category: Myanmar Laws
Category: နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ/စာချုပ်များ
Created on Wednesday, 25 June 2014 10:02
ဤမြန်မာ သတင်းထောက်များ လက်စွဲ စာအုပ်ကို ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရံပုံငွေ အဖွဲ့၊ သတင်းနှင့် ဇာနယ်ဇင်း သင်တန်းမှ ဖြန့်ဝေပါသည်။
down load here.
Please leave comments or requests to revise or update, about this law...
မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။
မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။
ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?
အစိုးရ တစ်ခုချင်းအလိုက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တည်ဆဲဥပဒေများ
၂၀၁၆ မှ ယနေ့ထိ (ဒီချုပ်)
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၆ အတွင်း (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)
၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၁ အတွင်း (နဝတ+နအဖ)
၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ အတွင်း (မဆလ)
၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ အတွင်း (ဖဆပလ)
၁၈၀၀ မှ ၁၉၄၈ အတွင်း (ဂျပန်+ ဗြိတိသျှ)
ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ၂၀၁၇
ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ၁၉၁၄
၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ
ကွန်ပျူတာ ဖွံဖြိုးရေး ဥပဒေ
အီလက်ရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ
နိုင်ငံတကာ စာချုပ်၊ စာတမ်းများ
ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်း
မြန်မာကို ပိတ်ဆို့သည့် ဥပဒေများ
ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်
ယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.
CSR project by Myanmars.NET
Welcome to Myanmar Laws Archive. This isaCSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.
We also haveaCSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.
ဥပဒေ / Laws
ပိဋကတ် ၃ပုံ / Buddhist Bible
ဝဗ်ဆိုက်လုပ်ချင်ရင် / Makeaweb site
ကြော်ငြာလိုလျှင် / Advertise here
လမ်းညွှန် / Directory
Latest Laws Updates
1947-01-27 - Aung San-Atlee Agreement ***
1943-08-01 Declaration of Burma Independence ***
1948-01-04 Declaration of Independence of Burma ***
page views so far.
Copyright © 2020. Myanmars.NET